အမေးများသော မေးခွန်းများ - True Money Myanmar
1. True Money ဆိုင်တွေမှာ ငွေလွှဲရင်ဘာတွေလိုမလဲ။
“လူကြီးမင်းအနေနဲ့ TrueMoney ငွေလွှဲရန် ၁။ လူကြီးမင်းဖုန်းနံပါတ်နှင့် ငွေလက်ခံမည့်လူ၏ဖုန်းနံပါတ် ၂ခုလုံးကို TrueMoney ကိုယ်စားလှယ်ကို ပေးပြီး ငွေလွှဲမည့် ပမာဏကိုပြောပါ။ (ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်မည်ဆိုပါက ငွေလွှဲ၊ငွေလွှဲထုတ်မည့် Phone Number အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်မှစ၍နောက်ပိုင်း ငွေလွှဲငွေထုတ်မည့်အချိန်တိုင်း၌ ၎င်း Phone Number အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအားထပ်မံ၍ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။) ၂။ ငွေလွှဲပြီးနောက်တွင် SMS လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ငွေလက်ခံမည့်သူထံ ဖုန်းဆက်၍ SMS ပေါ်မှ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Passcode) ကို ပြောပြပါ။”
2. True Money ဆိုင်တွေမှာ ငွေထုတ်ရင်ဘာတွေလိုမလဲ။
True Money ဆိုင်များတွင် ငွေလက်ခံမည့်ဖုန်းနံပါတ်၊ ငွေထုတ်မည့်ပမာဏ နှင့် ငွေလွှဲသူထံမှရထားသော လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Passcode) ကို ပြောပြ၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
3. True Money ဆိုင်တွေမှာ ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်ရင် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်သလဲ။
True Money ဆိုင်များတွင် ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်မည်ဆိုပါက ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်မည့် Customer များအနေဖြင့် ငွေလွှဲ၊ငွေလွှဲထုတ်မည့် Phone Number အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များထည့်သွင်းခြင်း နှင့် ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းကို ၅မိနစ် အတွင်း အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ယခင်ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်ခဲ့ဖူးသော Customer များအနေဖြင့် ငွေလွှဲ၊ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းကို ၁မိနစ် အတွင်းအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
4. True Money ဖြင့်ငွေလွှဲပြီးပါက အောင်မြင်ကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။
True Money ငွေလွှဲခြင်းအောင်မြင်ပါက ငွေလွှဲသူ Phone Number သို့ ငွေထုတ်နိုင်မည့် Passcode ကို ၅မိနစ် အတွင်း SMS ပေးပို့ပါတယ်။ ၅မိနစ်အတွင်း SMS မရရှိပါက ငွေလွှဲခဲ့သည့် ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ 09969519999 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး Call Centerမှ ဝန်ထမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ ငွေလွှဲခြင်း အောင်မြင်မှုရှိ မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
5. ငွေထုတ်နိုင်မည့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Passcode) ကို ငွေလွှဲသူမှ SMS မရရှိလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
ငွေလွှဲသူသည် ၅မိနစ်အတွင်း လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Passcode) အား SMS ဖြင့်မရရှိပါက ငွေလွှဲတဲ့ခဲ့သည့်ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ 09969519999 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး Call Center မှ ဝန်ထမ်းနဲ့ဖြင့်ဆက်သွယ်၍ စစ်ဆေးကာ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Passcode) ကို ထပ်မံရယူနိုင်ပါတယ်။
6. True Money ဆိုင်များရဲ့လိပ်စာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
True Money ဆိုင်များရဲ့လိပ်စာကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ (သို့) True Money Call Center နံပါတ် 09969519999 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပါတယ်။
7. True Money ဆိုင်တွေမှာ ငွေလွှဲရင် ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
True Money ငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခများကို ဤနေရာ တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ (သို့) True Money Call Center နံပါတ် 09969519999 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပါတယ်။
8. True Money ဆိုင်တွေမှာ ငွေထုတ်ရင် ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
True Money ဆိုင်တွေမှာ ငွေထုတ်ရင် ဝန်ဆောင်ခ လုံးဝပေးရန်မလိုပါ။ ငွေထုတ်ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံခြင်း ခံရပါက True Money Call Center နံပါတ် 09969519999 သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
9. True Money မှာ အလုပ်လျှောက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ။
True Money မှာ အလုပ်လျှောက်ချင်ရင် career.hr@ascendcorp.com သို့ Mail ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။